Zidane oo cadeeyay in Real Madrid ay taageersan tahay, xilli uu shaaca ka qaaday go’aankiisa kaga aaddan Ramos – Gool FM
(Madrid) 04 Dis 2021. Tababaraha reer France iyo kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa ka soo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka ay habeen dambe kula ciyaari doonaan naadiga Seville horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Real Madrid ayaa ku booqan doonta kooxda Seville garoonkeeda ee Ramon Sanchez-Pizjuan, si ay u wada ciyaaraan kulanka adag la wada sugayo ee horyaalka La Liga, xilli Zinedine Zidane iyo kooxdiisa Los Blancos ay dhawaanahan la kulmeen natiijooyin liita.
Haddaba Zinedine Zidane ayaa jirkan Jaraa’id kaga hadlay dhowr arrimood ee quseeya kooxda Real Madrid, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Kooxda runtii way i taageertay, raali kama noqoneyno marka aan guuldarreysano, waxaan diyaar u nahay inaan difaacno kooxdan.”
“Nasiibka kaliya oo aan leenahay ayaa ah inaan ku suganahay kooxdan, waxaana sii wadi doonaa inaan soo bandhigno wixii aan awoodno, iyo inaan in badan difaacno.”
“Berri waa inaan guuleysanaa, kaddibna waxaan ka fikiri doonaa kulanka Shakhtar Donetsk ee Ukraine, waa inaan helnaa jawaabta ku haboon.”
Intaas kaddib Zinedine Zidane ayaa ka hadlay xaalada kabtanka kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos, wuxuuna yiri:
“Halis ma gelin doono Sergio Ramos haddii uu diyaar yahay, wuu ciyaari doonaa”.